सन्दर्भमा कांग्रेस राजनीति
चीनको चुच्चे रेल र पानीजहाजमा सहज यात्रा र सुखमय जीवनको लोभले नेकपालाई चुन्ने जनता आफै जिल्लिएका छन । सरकारमा बोलीको निरन्तरता छैन । महंगीको भासमा दुनियाँ भासिएको छ । गरीवले कमाएर खाने कतै एकटुक्रा धर्ती देखिदैन । प्रधानमन्त्री ओली सरकारी टेलिभिजनमा संचालित कार्यक्रममा बोल्दा समेत के वोल्ने हो त्यसको विचार पुर्याउँदैनन ।
नेपाली कांग्रेस गएको चुनावमा लागेको पराजयको झडकाबाट वाहिर निस्किइ सकेकोछ । तै पनि, नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को झण्डै दुइ तिहाइ संसदीय समर्थनको नजीक पुगेको सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका रुपमा दिनुपर्ने कडा झटका दिन सकेको छैन । सरकार संचालक पार्टीको एकाधिकारवादी चिन्तनको सही पहिचान गरेर पनि कांग्रेसका नेताहरु त्यसका विरुध्द एकजूट हुन सकेका छैनन । उनीहरु गुटीय प्रतिस्पध्र्दामा लिप्त छन । हालै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको वैठकमा महामन्त्री शशांक कोइरालाले सभापति देउवासंग सत्ता हस्तान्तरणको मांग गरेर पहिलो पल्ट आपूmलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा प्रस्तुत गरे । यो उनको राजनीतिक भ्रम थियो जुन समयान्तरमा भूलको रुपमा देखा पर्नेछ । कोइरालाको मनसाय वुझेका सभापति देउवाले पार्टीबाट थाकेकाहरुलाई “रिटायरमेण्ट” लिने सुझावमात्र दिएनन, महामन्त्रीले भन्दैमा आपूmले नेतृत्वनछाडने पनि प्रष्ट पारे ।निश्चयपनि, सभापति देउवा निर्वाचन अभियान हाँक्ने कुरामा असफल भएका हुन । उनले पार्टीमा नयाँ विचारको विजारोपणगर्न नसकेका मात्र होइनन, पार्टीमा रहेको गूटवाजीलाई समाप्तगर्न खासै प्रयत्न पनि गरेनन । पार्टीमा आ–आफनो हकदावीगर्दै हिड्ने नेताहरुको विगविगीलाई चिर्न नसक्नु मात्रै उनको कमजोरी थिएन । पार्टीको भावी नेतृत्वमा जान लायक, विचारशील र लोकप्रिय नेताहरुलाई समेटने कुरामा पनि उनी विफल भए । उनको भूमिकाबाट उनका राजनीतिक सहयोगीहरु त खुशी भएनन नै, आफन्तहरु पनि खुशी हुन सकेनन । सभापति र महामन्त्री दुवैले कांग्रेसभित्र बढदो आन्तरिक कलह र गुटवन्दी समाप्तगर्नेमा आफनो भूमिका केन्द्रित नगरेर कार्यकर्तालाई निरास वनाए ।वर्तमान सरकारका कतिपय नीति र कार्य पध्दति वेहूदामात्र छैनन, देशको मूल्य पध्दतिका विरुध्द उभिएका छन । सरकारले शून्य सहनशीलताका सूचिमा राखेका भ्रष्टाचार लगायत अरु कतिपय कुरा देशका लागि सर्वमान्य हुने खालका छैनन । कांग्रेस नेतृत्वले यसका विरुध्द वैकल्पिक नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर, त्यसका लागि कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु पनि तयार देखिएका छैनन । नेकपा सरकारले प्रतिपक्षका लागि तमाम इस्सूहरु दिएको छ । ३३ किलो सुन तस्करीको खेल अहिलेसम्म टुंगिएको छैन भने देशभर फैलिएको अराजकताले जनतामा हाहाकार मच्चिएकोछ । कर तिरेर आफनो व्यापार गरी रहेका व्यवसायीहरुलाई सुन तस्करको आरोप लगाएर उनीहरुले सुसंचालनगर्दै आएको व्यापार सरकारले नै तहस नहस पार्न खोजेको छ । जनताको तहमा कुरागर्ने हो भने कंचनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा सुरक्षाकर्मीहरुको संलग्नताको चर्चाले सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेकोछ । निर्मला बलात्कार र हत्याको विरोधमा देशव्यापि रुपमा फैलिएको आन्दोलनले सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । यसवाहेक, अन्य कतिपय उपक्रम र घटनाहरु छन जसलाई प्रतिपक्षको रुपमा कांग्रेसले वलियोसंग उठाउन सक्दछ ।तर, कांग्रेसका नेताहरुले यो कुरा वुझन सकेका छैनन । उनीहरु सभापति देउवाका विरुध्दमा जति सक्रिय हुन्छन त्यति नै आपूm कमजोर हुन्छन । कांग्रेसमा वीपी कोइरालाका छोराको हैसियत त स्थापित हुन सकेको छैन भने अर्जुन नरसिंह र कृष्ण सिटौलाहरुको त कुरै भएन । सभापति देउवा र महामन्त्री कोइरालाहरुको गीता गाएर भन्दा कांग्रेस संगठनको गीत गाएर अगाडि वढनुपर्ने कांग्रेसका युवा नेताहरु फेसबुके राजनीतिका अम्मली वनेका छन । संगठनलाई वलियो वनाउन भन्दा आफैलाई वढी फोकसगर्न लागेका “युवा” नेताहरुले पार्टीका लागि गतिलो योगदान दिन सक्लान भन्न गाह«ो छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा एकसेएक पढे–लेखेका, अंग्रेजको भन्दा राम्रो अंग्रेजी वोल्ने, सटीक ट्वीटगर्ने, पत्र–पत्रिकामा नियमित लेख्ने व्यक्तित्वहरु छन र पनि त्यो पार्टीको अवस्था गतिलो छैन । नेपालमा त गतिला मानिसकै अभाव छ । पार्टीमा अमेरिकाबाट पी.एचडी. गरेका डा. मीनेन्द्र रिजाल र डा. प्रकाशमहत जस्ता व्यक्तित्वहरु नभएका होइनन । तर पनि, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा गर्नुपर्दा डा. रामशरण महत नै अघि सर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री भै हाल्छु कि भन्ने लोभमा डा. महत बुढेशकालमा पनि सक्रिय रहेका छन । कारणहरु प्रष्ट छन ः कांग्रेसभित्रका हस्ती भनिने व्यक्तिहरु कोही पनि आत्मनिर्भर छैनन । कांग्रेसमा लोकप्रिय भनिएका युवा नेता गगन थापा समेत राजनीतिक हिसावले आफनै खुट्टामा राम्ररी उभिन सकेका रहेनछन । सभापतिको चुनावमा उनी कृष्णप्रसाद सिटौलाको शरणमा पुगेर महामन्त्रीको उम्मेदवार वनेका थिए । यी सबै नेताहरु कोही शेरबहादुरबाट र कोही शशांक कोइरालाबाट संरक्षित भएर आफनो राजनीति चलाउन चाहन्छन । देउवा र कोइरालालाई चुनौति दिनसक्ने क्षमताको उनीहरुले विकास नै गर्न सकेका छैनन । नेताको संरक्षणमा रहेर राजनीतिगर्ने उनीहरुको यो प्रयास अहिलेसम्म सफल भएको छ । किनभने, यसवेला कांग्रेसको दुर्भाग्य नै यही भएको छ कि यसमा आँट र साहस भएका कार्यकर्ताभन्दा कमिशनखोर वनियाँका विचौलिया नै वढी देखिएका छन । नेपाली कांग्रेसमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा जस्तो जवाहरलाल नेहरु–इन्दिरा गान्धीको जस्तो उत्तराधिकारको परम्परा छैन । बीपीले पार्टी र यसको लोकतान्त्रिक–समाजवादी अवधारणालाई अघि वढाउने जिम्मा तीनजना साथीलाई दिनुभयो ः गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, र गिरिजाप्रसाद कोइराला । गिरिजाप्रसाद बीपीको भाइको हैसियतले भन्दा पनि कांग्रेसका अभियन्ताको हैसियतले नेतृत्वमा पुगेका थिए । अहिलेको नेतृत्वमा पनि शशांक र प्रकाशमान सिंहले पारिवारिकअधिभार वोकेका छन । उप–सभापति बिमलेन्द्र निधिमा पनि आफना पिता महेन्द्रनारायण निधिको राजनीतिका केही प्रभाव पक्कै होलान । तर, राजनीतिक निर्भरताको हिसावले आफना पिताको राजनीतिमा सबैभन्दा कम निर्भर बिमलेन्द्र नै देखिएका छन । कांग्रेसमा कुनै नेताको लिगेसीको स्थापनागर्नु नै अप्ठेरो छ । देशमा अहिलेपनि राष्ट्रिय स्तरमा नाम र कामको प्रभाव भएका नेताको अभाव छैन । तर, उनीहरुको सन्तानले कांग्रेसको राजनीतिमा बर्चस्व कायमगर्न सकेका छैनन ।चीनको चुच्चे रेल र पानीजहाजमा सहज यात्रा र सुखमय जीवनको लोभले नेकपालाई चुन्ने जनता आफै जिल्लिएका छन । सरकारमा बोलीको निरन्तरता छैन । महंगीको भासमा दुनियाँ भासिएको छ । गरीवले कमाएर खाने कतै एकटुक्रा धर्ती देखिदैन । प्रधानमन्त्री ओली सरकारी टेलिभिजनमा संचालित कार्यक्रममा बोल्दा समेत के वोल्ने हो त्यसको विचार पुर्याउँदैनन । देश संघीय भएको छ । तर, नेकपाका नेताहरु प्रदेशको सुसंगठनलाई अघि वढाउन तयार छैनन । राजपा नेपालको झण्डामुनी समेटिएका मधेशका नेताहरुले नेकपा सरकारलाई समर्थन दिएका छन । फोरम त सरकारको “खम्वा” नै बनेको छ । तर, वर्तमान नेकपा सरकारले संघीयतालाई सुदृढ वनाउँछ भन्नेमा स्तम्भकारलाई अलिकति पनि विश्वास लाग्दैन । नेकपा अहिले सवैलाई लालिपप देखाएर शासनगर्न चाहन्छ । संघीयताका पक्षधरहरु मधेश–२ र त्यसका समानान्तर भूमिमा मात्र छैनन । कांग्रेसले यी कुराहरुको मनन गर्नु पर्दछ । अहिलेको अवस्थामा सभापति देउवालाई टक्करदिने कुनै नेता कांग्रेसभित्र देखिएको छैन । रामचन्द्र पौडेलजस्ता नेताले च्याँखे दाउ थापेर राजनीति गर्नुभन्दा देवघाटतिर सत्संगमा लाग्नु लगाउनु उपयुक्त हुनेछ । सभापति देउवालाई टक्कर दिने सभापति देउवा नै हुन । उनी अहिलेको जस्तै अनिश्चय र अनिर्णयको वन्दी हुँदै गएभने उनको अगाडि चुनौतिको थुप्रो लाग्न सक्दछ । तर, नेकपा स्वयं शक्ति संचयको खोजीमा लागेको अहिलेको अवस्थामा देउवाको विकल्प खोज्नु कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुनेछ